Bọọlụ gọlfụ omenala, nnukwu bọọlụ gọọlfụ, bọọlụ gọọlụlụ kwụ ọtọ - SPEED
Bọọlụ Ibe atọ
Bọọlụ Abụọ Abụọ
Ngwa Hangzhou Speed ​​Sports Goods Co., Ltd. dị na Osimiri Fuchun mara mma, bụ enyemaka nke Zhejiang Feihong Communication Group. Tọrọ ntọala na 2018, ụlọ ọrụ ahụ na -ekpuchi mpaghara karịrị mita 8000 ma were ndị ọrụ 60. Companylọ ọrụ ahụ na -ewepụta ahịrị mmepụta golf nke mba ụwa.
Oge ọkọlọtọ China 22 Dec 2012 bụ afọ dị mkpa maka Lee Westwood, onye ji aha njem nlegharị anya nke iri abụọ na ise nke European mepere n'afọ Abu Dhabi wee gụchaa nke mbụ. Ọ bụ onye ọkpụkpọ afọ iri anọ na asaa nke afọ Britain maka oge nke anọ n'ọrụ ya, na-ebili site na 59th ruo 36th na ọkwa ụwa. Ọ bụ a ...
Companylọ ọrụ anyị bụ nke ụlọ ọrụ enyemaka nke Zhejiang Feihong Group Co., Ltd., Companylọ ọrụ Group kwagara Lushan Street na 2019, ụlọ ọrụ ahụ niile na -ekpuchi mpaghara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị hekta na iri ise. Mgbe mbughari nke ụlọ ọrụ anyị, ụlọ ọrụ alaka anyị gbasaa mmepụta, INVESTMENT I ...
Oge Oge China, Ashley Gilliam nke Manchester, Tennessee, bụ nwa akwụkwọ mahadum Mississippi State 5-foot-7-inch. Ọmarịcha kọleji Golfer, Ashley Gilliam bụ onye otu Golfweek national team nke atọ, Wgca All-American Honorable Team, All-SEC First Team, Sec All-Freshman Team, SEC Fir ...
Okwu: Owuwu 2 Xiejiaxi Village, Lushan Subdistrict, Fuyang District, hnagzhou City, Zhejiang Province, China
Bọọlụ Golf na -egbuke egbuke, Bọọlụ Golf kacha mma maka itinye, Bọọlụ bọọlụ ụfụfụ, Bọọlụ Golf kacha agba agba, Golf Noodle, Bọọlụ Golf kacha elu,